सीके राउतको सरकारसँग आत्मसमर्पण हो : उपेन्द्र यादव - Jhilko
सीके राउतको सरकारसँग आत्मसमर्पण हो : उपेन्द्र यादव
काठमाडौं । सरकारसँग सीके राउतले गरेको ११ बुँदे सम्झौतापछि नयाँ राजनीतिक तरङ्ग आइरहेका बेलामा मधेसी आन्दोलनका एक समय हस्ती तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले राउतको सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको जनाएका छन् । डा.सीके राउतले सरकारसमक्ष समर्पण गरेको विषयलाई लुकाउन जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाइएको मधेसका अन्य दलले पनि भनेका छन् ।
समकालीन राजनीतिकभित्र आफूलाई स्थापित गराउन खोजिएको आवरणमा माथिको बर्कोलाई उघार्न बाध्य भएकाले सरकारसँग सम्झौता गर्न उनी बाध्य भएको तराई मधेशका नेताहरूले बताएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. सीके राउतले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो सफलता पाएको बताउँदै उनले भने “प्रधानमन्त्री ओलीले डा. सी के राउतलाई आफ्नो बाटो फेर्न लगाएर एक ठूलो विजय प्राप्त गर्नु भएको छ ।”
विगतको निर्वाचनका बेला डा. सीके राउतले गरेको प्रचार अभियानको परिणाम सबैका सामु अगाडि नै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
राउतले केही ठाउँमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा जनमत संग्रहको परीक्षण निर्वाचन गराएका थिए । गएको निर्वाचनमा मतपत्रमा बहिष्कार गर्न भनेका थिए । राउतको हैसियत मधेशमा रहेको भए मतपत्रमा बहिष्कार गरिएका मतपत्र हुने थिए । त्यसका आधारमा निर्वाचन बदर हुन सक्ने थिएन । त्यसैले राउत त्यहाँ असफल हुनुमा मधेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलको प्रभावलाई कम गर्न नसकिएपछि सरकारसँग सम्झौता गरी पछि हटेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पटकपटक पक्राउ परेका डा. सीके राउतले अदालतमा दिएको बयानमा कहिल्यै आफूले स्वतन्त्र मधेशको माग गरेको स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यहाको सम्झौताबारे देखिएका विमतिहरूको खासै अर्थ नरहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
आफूहरूको पार्टी लोकतान्त्रिक अवधारणाको आधारमा गठन भएको जनाउँदै राजपाका युवा नेता तथा सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले भने “पृथकतावादी नारा लगाएका राउत अहिले सम्झौतामा आउनु आफैमा गलत छैन । तर सरकारले पहिलेदेखि नै लोकतान्त्रिक आचरण गरेका शक्तिहरूलाई पाखा लगाउन खोज्नु भने गलत हो ।”
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी यो संविधान बनाउने शक्ति भएको जनाउँदै डा. झा भन्छन् “संविधानमा रहेका असहमतिलाई पो विरोध गरेका छौं त यसका राम्रा पक्षलाई स्वीकार गरेका छौ । लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यसको विरोध ग¥यौं ।”
आफ्ना सहयोगीदेशसँग ‘सेक्युरिटी मनी’ खोज्दै अमेरिका
शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको तीव्र मतभेदका...
नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुनु अगावै गौतमबुद्ध विमानस्थलको...
आगामी डिसेम्बर महीनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको काम पूरा...